मेलम्ची खानेपानी : सुरुङमा पानी भर्न थालेर परीक्षण शुरु « Rara Pati
मेलम्ची खानेपानी : सुरुङमा पानी भर्न थालेर परीक्षण शुरु
प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७७, सोमबार
१० फागुन, काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको साढे २६ किलोमिटर सुरुङमा आज पुनः पानी भर्न थालेर परीक्षण शुरु गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक काम पूरा गरेसँगै पानी हालेर परीक्षण गरिएको हो । खानेपानीमन्त्री मणि थापा, युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा तामाङ, शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र पूर्वकानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलगायतले आज सो कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन् । आयोजनास्थल अम्बाथान सुरुङमा नै औपचारिक कार्यक्रम गरेर काम अगाडि बढाइएको हो ।
गत असार २१ गतेदेखि पानी परीक्षण शुरु गरेको आयोजनाले ३० गते १७ नम्बर गेट फुटपछि परीक्षण स्थगित गरिएको थियो । सो घटनामा दुईजनालाई खोलाले बगाएको समेत थियो । दुईमध्ये एकजनाको शव फेला परेको छ भने एकजनाको शव अझै फेला परेको छैन ।
मन्त्री थापाले पानी काठमाडौं लगेर वितरण गर्न सक्यो भने ठूलो उपलब्धि हासिल हुने बताए । उनले आयोजनाका बारेमा आफूलाई खासै ज्ञान नभएको भन्दै सचिव र इन्जिनीयरसँग समन्वय गरिरहेको बताए । पूर्वमन्त्री तामाङले पानी पथान्तरण गरिसकेपछि जिल्लावासीले पाउने लेभीको टुङ्गो छिट्टै लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले पानी लगिसकेपछि काठमाडौंले सिन्धुपाल्चोकको विकास निर्माणको काममा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोजनाको मुख्य दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को अनुदान सहयोगअन्तर्गत चारजना विशेषज्ञको टोलीले सुरुङ, मुहानस्थल, गेटलगायत संरचनाको पुनः जाँच गरेको थियो ।
‘विशेषज्ञहरूले निरीक्षण गर्नुभयो, उहाँका महत्वपूर्ण सुझावलाई समावेश गरी पुनः परीक्षणका लागि तयार गरिएको छ’, आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक तिरेश खत्रीले भने ।
विगतको जस्तो दुर्घटना नहोस् भन्नका लागि आयोजनाले यसपालि विशेष सतर्कता अपनाएको खत्रीले बताए । परीक्षणका क्रममा हेलिकप्टरलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । उद्धार योजना बनाएर धुलिखेल तथा काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालसँग समन्वय गरिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक खत्रीका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलादेखि काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्मको साढे २६ किलोमिटर सुरुङ भर्न १६ दिन लाग्नेछ । शुरूआती चरण भएकाले सुरुङको क्षमताअनुसार पानी नछाडिने उनले बताए ।
कर्णाली करिडोरको पक्की पुल सञ्चालनमासुर्खेत । कर्णाली करिडोर अन्र्तगतको कणाली नदीको नरहरिनाथ–८ कालीकोटको खुलालुमा रहेको
भाइरल तस्बिर: नाङ्लो पसल र जनगायक जीवन शर्मा
कुनै चीरपरिचित नेताले नाङ्लो पसल सुरु गरेको भए अनौठो लाग्थ्यो होला तर जीवन शर्माले नाङ्लो
नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि
पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा देखापरेको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण नेपालमा पनि पुष्टि भएको
खाद्यान्न अभाव भएको हुम्लाको लिमीमा दुई सय १५ क्विन्टल खाद्यान्न पु¥याइयो
सुर्खेत । खाद्यान्नको चरम अभाव भएको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित लिमीमा २ सय ५० क्विन्टल
यात्रुले नै जहाज धकेलेपछि…….
काठमाडौं । चारपाङ्ग्रे हलुका सवारीसाधनलाई मानिसहरुले धकेलेको त तपाईं हामी सबैले देखेका छौं । तर बुधबार
कांग्रेस कर्णाली : पौडेल समूहबाट भुपेन्द्रजंग उम्मेदवार, देउवा पक्षबाट को–को छन् आंकाक्षी ?
नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभापतिमा संस्थापनइतर (पौडेल) समूहबाट भुपेन्द्रजंग शाहीको उम्मेदवारी हुने भएको छ ।